Maninona no tsy mahomby aminao ny sakaizanao PR | Martech Zone
Na dia mankasitraka adihevitra momba ny sioka aza aho indraindray, dia mendrika ny hizara ny resaka eto sy hifanakalo hevitra bebe kokoa hatrany izany indraindray. Ny ohatra omeko androany dia natomboka tamin'ny fanambarana an-gazety izay niarahanay niasa tamin'ny Dittoe PR nanambara ny vaovao tranonkala.
PRDude… milaza tena mpiaro an'ny orinasam-pifandraisana izay mitafy ny anarana tsy fantatra anarana (paikady sosialy lehibe), naka ny valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety amin'ny lahasa satria tsy mifanaraka amin'ny fahitany ny a valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety tokony ampiasaina amin'ny… vaovao. Avelako ianao hamaky ny resaka:
Ny mahatsikaiky dia iray amin'ireo antony hankafizinay ny fiaraha-miasa aminy Dittoe PR dia ny fahatsapan'izy ireo fa ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny besinimaro dia ampahany amin'ny tetikady marketing amin'ny ankapobeny. Niara-niasa tamina mpanjifa maromaro izahay ary nanana valiny miavaka tamin'ny alàlan'ny fampiasàna ireo fanambarana an-gazety miaraka amin'ny paikady fikarohana sy fifamatorana fiaraha-monina matanjaka. Ity famoahana gazety manokana ity dia dingana tokana amin'ny paikady ankapobeny anaterantsika izany amin'ny besinimaro.
Mandiso fanantenana fa ny karazana PR any amin'ny sekoly taloha toa ny PRDude dia tsy mahatakatra ny marketing anatiny, ny fanatsarana ny fanovana, ny paikadin'ny landing page, ny marika, ny fahatsiarovan-tena, ny fanatsarana ny motera fikarohana… ary indraindray tsy tsapany akory ny tombony azo avy amin'ny tetikady votoaty lehibe. Iray amin'ireo orinasa PR lehibe indrindra eto an-tanànanay nikatona… niova ny indostria ary tsy afaka nitazona izy ireo. Ataoko fa izany no PRDude miaro.
Tamin'ny alàlan'ny bitsika momba an'io - na eo aza ny trolling - PRDude no nanaporofo fa nahomby ny famoahanay gazety. Tiako ny zava-misy fa niaiky izy fa nahita ilay famotsorana tamin'ny toerana lehibe tao amin'ny Google News. Tsara izany! Mazava fa nahatratra mpihaino izay tsy mbola hitanay taloha - tanjona iray amin'ny fizarana PR izahay. (Mahavariana, hita fa nanjary nasionaly ny fizarana teo an-toerana tamin'ny tranonkala sasany.) Nahazo bitsika am-polony maro izahay ary voalaza tao amin'ny tranonkala ny famotsorana.
Fandefasana gazety tsy ny fanoratana “vaovao” fotsiny intsony. Nivoatra ny indostrian'ny PR… fa mamela ny sasany amin'ireo matihanina PR ho lasa izy. Ireo mpanjifa sy orinasa dia mitady vaovao amin'ny alàlan'ny motera fikarohana, noho izany dia ilaina ny fananana fisian'ny fikarohana voajanahary. Mandray anjara amin'ny fiaraha-monina ny mpanjifa sy ny orinasa, noho izany ilaina ny fananana paikady ara-tsosialy. Na izany aza, orinasa sy loharanom-baovao maro no mbola miantehitra amin'ny serivisy fizarana vaovao hahitana ny vaovao tadiavin'izy ireo - ka mandeha tsara ny famoahana gazety.
A famoahana gazety voatsara tsara miaraka amin'ny fanaparitahana be dia be dia hanome backlinks avy amin'ireo tranonkala izay manana fahefana ambony sy manan-danja eo amin'ny sehatry ny asanao. Nahita fihenam-bidy betsaka tamin'ny fampahalalam-baovao avy amin'ny mpanjifanay izahay, nahita ny fivoaran'ny laharan'izy ireo, ary nahazo fitarihana maro tamin'ny fampiasana azy ireo.
Hanohy hiara-miasa amin'ny a orinasam-pifandraisana miandalana izay manohy mahita ahy sy ireo mpanjifako fotoana tsy mampino ao amin'ny indostria, ao anatin'izany ny lahatsoratra ao amin'ny New York Times, Cult of Mac, Wired Magazine, iMedia Connection, VentureBeat, Mashable, sns. Ary ny tsara indrindra dia mangarahara amin'ny asany izy ireo … Sahy mizara ny anaran'izy ireo sy ny tranony an-tserasera.
Ka… mety tsy hitovy hevitra amiko ny PRDude (miampanga ahy izy ankehitriny fa tsy mpanara-dia sandoka ihany koa). Tsara izany, tena tsy miraharaha aho. Tsy mpihaino kendrena amiko izy ary tsy misy famantarana momba ny fahombiazan'ny marketing ankapobeny ataontsika. Na dia mandefa gazety amin'ny fomba tsy fantatra anarana aza izy, mahazo valiny ho an'ny mpanjifanay izahay ary mampitombo ny orinasany. Manantena aho fa indray andro any afaka mifanakalo amin'ny milina fanoratany izy ary tena mijery ny fivoaran'ny serasera amin'ny fomba ifandraisantsika amin'izy samy izy.
Tags: prpr mafyprdudegazety an-gazetyfifandraisana amin'ny vahoaka
Ny valin'ny mpanoratra nohamarininay dia valiny 484% ambonimbony amin'ny Click-Through
Dec 28, 2011 amin'ny 10: 30 AM
Manontany tena aho hoe mandra-pahoviana no tsy nahavita fanabeazana mitohy ity lehilahy ity? Miezaka mafy ny profesora manaisotra ny foto-kevitry ny famoahana “mpanao gazety” ary manizingizina fa antsoina hoe famoahana “haino aman-jery” satria… tsara… mahavita izay rehetra nolazainao izy, Doug.
Dec 29, 2011 ao amin'ny 3: PM PM
Tsy misy manohitra ny fampiasana ny fanambarana an-gazety ho toy ny tetika amin'ny marketing. Ny zavatra nasongadiko fotsiny dia ny atin'ny famotsorana. Oviana ianao no farany nanangana tonian-dahatsoratra ho an'ny gazety na mpamokatra ho an'ny programa vaovao, ny zavatra voalohany angatahin'izy ireo dia ny fanambarana an-gazety. Ankoatr'izay, rehefa mandefa fanambarana an-gazety an'ity natiora ity amin'ny tariby ianao, dia alefa any amin'ny boaty famoahana. Izany no antony itiavan'ireo mpamoaka lahatsoratra ny fankahalany ireo olona PR mandefa fako, raha ny tena izy dia ireo mpivarotra no mampiasa an'ity serivisy ity ho an'ny atiny tsy mendrika hotantaraina. Izay ihany no lazaiko. Raha fisainana efa fahagola izany, dia antsoy aho hoe sekoly taloha, saingy heveriko fa maharatsy marika mihoatra noho ny fanampiana izany rehefa mandefa crap amin'ny mpanao gazety izay fantatry ny olona rehetra manana antsasaky ny ati-doha dia tsy ho voasarona mihitsy. Azontsika atao ny miady hevitra amin'izany rehetra tadiavinao izany, saingy avy amina asa samihafa izahay. Manaja ireo izay andefasako atiny ary manandrana manamarina fa zavatra ilain'izy ireo izany. Mikasika ny fananganana fifandraisana izany fa tsy fanapoahana imailaka an'izao tontolo izao. Tratry ny taona!
Dec 29, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
Dude PR - Mbola mandray ny olana aho fa "fako" na "tsy vaovao vaovao". Niresaka momba ny mahatsikaiky amin'ity lahatsoratra ity aho - saingy misy ny sasany. Toa misy karazana 'mpivarotra vs fifandraisana amin'ny besinimaro' any. The DK New Media ny fifandraisana amin'i DittoePR dia vaovao - orinasa PR nentim-paharazana izay nivoatra ary miara-miasa amin'ny masoivohom-baovao vaovao. Ary… masoivohon'ny haino aman-jery vaovao izay mahita lanja mahatalanjona amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe.
Satria tsy heverinao fa vaovao vaovao izany, dia tsy midika izany fa tsia. Ny valin'ny fanambarana an-gazety dia niteraka valiny tsara. Raha ny marina, ny anao irery no fitsikerana ampahibemaso hitanay. Ary, indray, raha jerena ny toerana lehibe azontsika - dia ny vaovao nankasitrahan'ny maro hafa.
Tena tiako ny valin-teninao tamim-pahatsorana momba ny resaka!
Izay raha ny faminaniako azy. Tsy azoko antoka hoe inona no tianao holazaina amin'ny fametrahana media. Izay rehetra mandeha amin'ny tariby dia raisin'ireo mpampita haino aman-jery izay misoratra anarana amin'ny serivisiny, fa tena midika ve izany fa hanakana ny zavatra ataony ny mpitati-baovao mba hitaterana an'ity karazana vaovao ity. Tamin'ny 1996, eny, tamin'ny 2011, tsia. Ho gaga aho raha misy haino aman-jery fahatelo manaja toa ny Indy Star na koa ny varotra toa ny Adweek na Ad Age hanome ity fijery faharoa ity. Raha nataonao ho fiaraha-miasa na fiaraha-miasa io dia hitako ny lanjan'ilay vaovao. Ny tranonkala iray nohavaozina dia tsy ampy amin'ny fenitry ny asa fanaovan-gazety raha ny fahitako azy. Tsy mitsikera ny paikady aho fa ny atiny fotsiny. Avy eo indray, namaly ny fella hafa aho fa tsy ny toeranao.
Mampalahelo fa ny mpivarotra vs. ny PR dia nitohy nandritra ny taona maro araka ny fantatrao. Tsy hanafintohina, fa tsy tiako ny antsoina hoe mpivarotra. Manome tanjona roa manan-danja nefa samy hafa izahay ho an'ny mpanjifa sy marika miaraka amina tanjona iray ihany. Miankina betsaka amin'ny fifandraisana voaorina amin'ny tonian-dahatsoratra, mpamokatra, bilaogera sns ny olona PR ary mahasosotra ny maheno azy ireo miteny amintsika fa mahazo famoahana vaovao tsy misy dikany loatra izy ireo ao anaty boaty. Bilaogera ianao eo amin'ny sehatry ny marketing. Hanao tantara momba ny mpanjifa namorona tranokala nohavaozina indray ve ianao eo amin'ny bilaoginao? Iza amin'ireo no ho tianao soratana raha manomboka mandefa famoahana vaovao momba azy ny tranokala tsirairay nanova endrika ny tranokalany? Ahoana no hamantaranao izay zava-dehibe soratana ary inona no tsy? Azafady mba lazao amiko raha very saina aho ary tsy misy dikany eto. Andro fialantsasatra izao ary efa andro maro no nisotroana. Cheers! 🙂
Rangahy PR: Ny valiny dia ny fomba hamaritana izay hosoratanay sy izay tsy soratana. Raha tsara ny valiny dia manohy mampiasa ny paikady izahay. Raha ratsy ny valiny dia mahita vahaolana vaovao izahay. Arahabaina koa ianao.
Misaotra. Mirary soa anao indrindra aho. Ampahafantaro ahy rehefa ao amin'ny Big Apple ianao dia hividy zava-pisotro anao aho. Tsy misy adihevitra na scotch mahafinaritra fotsiny. Tratry ny taona!
3 Jan 2012 amin'ny 1:03 PM
Famaranana tena mahafinaritra amin'ny adihevitra. Manaiky aho fa be loatra ny "banga" any, saingy heveriko fa tsara ny famotsorana ny famoahana tranokala, ary io no fantatro fa PR tsara - miankina amin'ny orinasa, mpihaino, famoahana no ahazoana famoahana. sns. Ao ambadik'i Douglas tanteraka aho tamin'ny famotsorana azy, saingy manaiky isika fa tokony hitandrina amin'ny famoahana be loatra. Ny sasany blitz zava-drehetra, ary manambany ny fisian'izy ireo.
5 Jan 2012 amin'ny 1:49 PM
Fellas deba tsara, ary mahafinaritra tokoa ny mahita olona roa afaka manaiky tsy hanaiky ny fanajana! +1 hoanareo roa!
13 Jan 2012 amin'ny 6:00 PM
Misaotra. Tsy fantatro manokana i Doug, fa fantatro fa olona hajaina amin'ny asany izy, ary na avy aiza na avy aiza, dia tokony hifanaja isika rehetra. Iriko ny tsirairay mba hiady hevitra amin'ny fomba sivilizasiona indrindra ny mpilatsaka hofidina na ny filoham-pirenena. Miloka aho fa ho hitantsika ny fanafihana ratsy kokoa sy ny tena manokana rehefa nafana ny primera.